मधेशवादी दलको काँधमा काँग्रेसको बन्दुक | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » मधेशवादी दलको काँधमा काँग्रेसको बन्दुक
मधेशवादी दलको काँधमा काँग्रेसको बन्दुक
अहिले देशको नजर संविधान संशोधनप्रति रहेको छ । एमाले संविधान संशोधन होईन, कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्छ । सविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव हुनु आवश्यक छ भन्दै आइरहेका छन् । नयाँ सविधान अुनसार चुनाव भए, कुन दलको कस्तो अवस्था छ त्यो पनि मापन हुन्थ्यो भनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वदेखि सामान्य कार्यकर्ताहरुबाट व्यक्त भईरहेको छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमालेलाई दोष देखाएर मधेशमा आफ्नो पैठ बनाउन सहानुभूतिको मलम लगाउन लागि परेको छ ।
मधेशवादी दलहरु काँग्रस र माओवादीको भातृ पार्टी जस्तो भएर एमालेविरुद्ध विष बमनमा लागेको देखिन्छ । मधेशवादी दलहरुले एमालेलाई मात्रै वैरी कितामा राख्नु उसको लागि निकै भ्रम रहेको लहानको वुद्धिजीवि डा. महादेव साह र जनजाति अगुवा राजेन्द्र चौधरीको कथन छ ।
संविधानको घोषणा एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकै ठाँउमा रहेर गरेको थियो । सत्ताको समिकरण फेरेर एमालेलाई अल्गाएर पुरा हुन नसक्ने मागमा मधेशवादी दलहरु सरकार बनाउन समर्थन गरेर काँग्रेस माओवादीको सरकार टिकाउन कवडी कवडी खेल्दैछन् । यो खेलले केही हुनेवाला छैन ।
संविधान कार्यान्वयन भएन भने मुलुकको अवस्था के होला ? देश र जनताप्रति अलि कति जिम्मेवार बन्ने हो भन्ने राजनीतिक दलहरुले अग्रगामी शक्तिहरुले एक भएर एकै थलोमा निकास र विकासको कुरा गर्नुपर्ने बेलामा बेमौसमको बाजा बजाउनु कतिको उचित हेला यतातर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।
राष्ट्रियताको आधार महेन्द्रवादी सोचले मात्रै पनि संभव छैन । कारण वागमतिमा निकै पानी बगि सकेको छ । जनतामा चेतनाको स्तर पनि निकै उठि सकेको छ । देश कुनै जाती विशेषको पेवा हुदैन । हरेक समूदायलाई छाहारी दिनका लागि न्यायपूर्ण पहुँच हुनैपर्छ । देशका प्रमुख अंगहरुमा हरेक समूदाय पुग्नुपर्छ । समानुपातिक सहभागिताको शुद्ध गणतीय हिसावलाई उतार्न जरुरी पनि छ । यस मानेमा एमालेलाई सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक पक्षमा जान जरुरी देखिएको छ । मधेशी, जनजाती, मुस्लिम, दलित लगायत पहिचान र अधिकारको कुरा जुन ढंगवाट अगाडि वढिसकेको छ ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न मुलुकको ईतिहासमा जिम्म्ेवार राजनीति दलको रुपमा देखा परेको एमाले नेतृत्वलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । अब विश्वासको आधार व्यवहार हो । सिद्धान्तको रटानबाट मात्रै यी समुदायहरुको विश्वास जित्न नसकिने भएकाले एमालेले उठाएको मुद्दाहरु जायज देखिए पनि शंकाको दृष्टिले मधेशमा हेरिदै छ ।
मधेशीको माग पुरा गर्न एमाले कतै मधेशी विरोधी भयो भनेर काँग्रेस माओवादी र मधेशवादीले फैलाएको यो हल्लालाई शान्त गर्न एमाले मधेशी समुदायको विश्वास जित्न अहिले संसदलाई ठप्प पार्ने बाटो खोलेर आफनो दलमा मधेशी नेताहरुलाई पदाधिकारी केन्द्रिय सदस्य तथा विभिन्न भागहरुमा समेटिएर एक जवर्जस्त निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
लहानको दुई नम्वर प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री क्रमशः माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमाले राष्ट्रियता, जनजविविका, हिमाल मधेश पहाड जोडेर चाहेको संघीयताको नमूना, विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्न नसक्ने दृढता, मधेशको विकास, मधेशको विकृति र यहाँको गरीवी हटाउन एमालेले गरेको कार्यक्रम विकासको मोडेल जस्ता सवालहरुमा राखेको धारणाले सबैलाई मनमोहित गरेकै हो ।
एमाले कार्यकर्ताहरुको गाँउसम्म चौतर्फी वैचारिक हमला हुँदा पनि मधेशमा एमाले कमजोर नरहेको प्रमाणित गरेको देखिन्छ । एमालेको कार्यक्रम विथोल्न मधेशी दलहरुको प्रयास कामयावी हुन नसक्नुले पनि एमाले आफनो ठाँउमा कमजोर त रहेको छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
कार्यक्रममा त्यस पार्टीको नेता नागेन्द्र चौधरी र लालवावु पण्डितको घतलाग्दो भनाईलाई एमालेले सुन्नैपर्छ । एमालेको मधेशी थारु कार्यकर्ताहरु पहिचान र सहभागिताको हिसाबले एमाले फराकिलो हुनुपर्छ । मधेशी थारुलाई सधै पार्टीमा रोल नम्वर दस वीस भनेर हुदैन ।
प्रथम द्धितिय कहिले हुने त्यो बाटोपनि खोल्नुपर्छ । मधेशी थारु जनताहरु नेपालकै मधेशमा आफनो अस्तित्व खोजेको छ । भारतीय हस्तक्षेप हामी पनि मन पराउदैनौ । हिन्दी भाषाको पक्षमा दिल्लीको इसारामा हिड्ने मधेशी थारु हामी होईनौ । पार्टीको दृष्टिकोण र उच्च तहका नेताहरुको बोलीमा संयमता हुनैपर्ने जस्ता सुझावलाई एमालेले मनन गर्नेपर्ने सुझावलाई एमालले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
एमालेको अवस्था मधेशमा बाहिरीबाट फैलाएको हौवा र भ्रमको कारण कमजोर कमजोर भयो जस्तो लागे पनि त्यस पार्टीमा संगठित कार्यकर्ताहरुले पनि हाम्रो नेतृत्व अलि फराकिलो भईदिए मधेशमा कमजोर पटक्कै छैन । चुनाव त होस् । पार्टीले पनि आफनो व्यवहारिक पक्षमा सुधार त गरोस भन्ने चाहना आम मधेशीको रहेको छ ।
मधेशप्रति एमालेका नेताहरुले बोलेका शब्दहरुका कारण मधेशी जनताको चित्त दुखेको पक्कै हो त्यो कुरामा सुधार गर्नुपर्ने एमालेको कार्यकर्ताको बीचबाटै उठ्न थालेको छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दल पनि एमालेको संगठन कमजोर गर्न यहि बेला तातेको फलाममा चोट हाल्न लागि परेको छ । तर एमाले कमजोर भयो भन्ने केही झिनो फाईदा मधेशवादी दललाई भएपनि त्यसको पूरै फाइदा काँग्रेसलाई हुने गरेको देखिन्छ । काँग्रेसले अहिले मधेशवादी दलको काँधमा बन्दुक राखेर चलाई रहेका छने ।
मधेशवादी दललाई एमाले विरोधी बनाई दिएको छ । एमालेलाई पनि मधेश विरोध बनाई दिएको छ । यसले गर्दा एमालेको मधेशबाट दुरी बढ्दै जान्छ र आफ्नो लागि मधेश सुरक्षित रहने बुझाई काँग्रेसको रहेको छ ।
तर समग्र मुलुकको विकास निकास र समृद्धिको लागि एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति एकै थलोमा आएर चुनावमा जाने हो भन्ने मधेश पहाड र हिमालमा कसैको दाल गल्दैन । देशमा वामपन्थीहरुको कवजा हुने र देश प्रगतितर्फ उन्मुख हुने देखिएको तर्क र चिन्ताहरु पनि व्यक्त हुन थालेको छ । कारण तीनै पार्टीको एजेन्डा नै अहिले समृद्धि र विकास रहेको छ । त्यसैले फुटेर होईन एक जुट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
(यादव सिरहाका प्रेस चौतारी निकट पत्रकार हुनुहुन्छ)